Kunamata Zvidimbu ZveMangwanani Kudzivirirwa Uye Kuvhara | NZIRA DZOKUNAMATA
Chipiri, Gunyana 14, 2021
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points YeMangwanani Kudzivirirwa Uye Kufukidza
Kunamata Points YeMangwanani Kudzivirirwa Uye Kufukidza
Nhasi tichave tichinangana nemunamato nzvimbo dzemangwanani dziviriro nekufukidza. Chokwadi chiripo, hupenyu hwazadzwa nekutya kukuru. Hupenyu hwemunhu hwakafanana nemhepo. Iwe uripano nguva ino, uye inotevera nguva, iwe waenda. Mumwe anogona kutotaura zvichaitika muminiti inotevera. Kune vanhu vazhinji vakafa, kwete nekuti yaive nguva yekuti vapindure kudaidzwa asi nekuti vakatorerwa dziviriro yababa nababa.
Semunhu waMwari, ndakasangana neminana isingaite inoshamisa kusaziva kuti nyasha dzekudzivirira nekufukidza hazvikwani kune wese munhu, nguva dzese uye kwese kwese. Izvi zvinotsanangura kuti sei iwe uchizoona mumwe munhu achipona mutsaona inotyisa iyo yakatora hupenyu hwevamwe. Hazvishamisi kuti bhuku raVaEfeso 5:16 rinoti, Chenjera kuti ufambe zvakanaka, kwete semapenzi asi sevakachenjera, uchitenga nguva, nekuti mazuva akaipa. Tinofanirwa kuve nehungwaru mukuita kwedu, uye tinofanira kudzidza kudzikinura zuva rega rega neropa raJesu rakakosha nekuti mazuva ese azere nehuipi.
Chokwadi chinosara, zvinhu zvinotyisa zvinoitika kanenge sekondi yega yega pazuva. Ndosaka tichifanira kukumbira Mwari kuti atidzivirire. Iwe uri jaya kana musikana ane zvishuwo zvakakura. Iwe unomuka kubva pamubhedha mangwanani ega ega nemisoro yako mudenga, wakagadzirira kutora hupenyu kusvikira chinangwa chako chichiitika. Zvakanaka, ndaona majaya nemhandara vane hasha kupfuura iwe vabatwa nemhepo yehupenyu. Vakafa zvishuwo zvavo zvisati zvaibva zvakakwana kuti zviitike. Hausi kuseka nekudzivirira kwaMwari.
Vana veIsreal vangadai vakafira munyika yeEjipitori. Vangadai vakatambiswa nguva refu Mosesi asati amutswa kuva mutungamiri kuti avabudise mukutapwa. Izvo zvinangwa zvevaIjipita zvaisave zvekuona vana veIsreal vachibudirira kana kubudirira. Vakakwira kunovarwisa pese pavanotya kuti huwandu hwavo hwakura zvakanyanya. Nekudaro, kuchengetedzwa kwaMwari Wemasimbaose kwaive kwakanyanya pavana veIsreal, ndosaka pasina rimwe rematambudziko rakabata chero rawo.
Mangwanani ega ega usati wabuda mumba mako, unofanirwa kutsvaga chiso chaMwari. Unofanira kumisa kuchengetedzwa kwaMwari pamusoro pehupenyu hwako. Izvo hazvipe dhiabhori mufaro kuti iwe uri kufara. Hazvimupe mufaro kuti uri mupenyu uye uri kubudirira. Chishuvo chadhiyabhorosi ndechekuti uve nechokwadi chekuti iwe wakafa kana kuve kusava nehupenyu muhupenyu. Ichi ndicho chikonzero iwe uchifanira kutsvaga Mwari mangwanani-ngwanani. Usati waenda kunze kune zvaunoda zvezuva nezuva, taura iyi minamato yekudzivirirwa uye yekufukidza.
Ishe Jesu, ndinokutendai nerimwe zuva rakanaka. Ndinokutendai nenyasha dzenyu dzamakandipa kuti ndione zuva idzva ramakaita. Ishe, zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
Ishe Mwari, rugwaro rwunoti Ona zvino kuti ufambe zvakaringana, kwete semapenzi asi sevakachenjera, uchitenga nguva, nekuti mazuva akaipa. Ndinonamatira kuchengetedzwa kwako kusingazununguki pamusoro pemhuri yangu neni. Ndinokumbira kuti ngirozi dzenyu dzinditungamirire munzira dzangu nhasi kunyangwe pandinoenda kubasa.
Ishe Jesu, zvakanyorwa kuti, maziso aIshe anogara ari pane vakarurama. Baba ndinonamata kuti maziso enyu agare ari pandiri nhasi. Ndinonamata kuti mweya wako unditungamirire munzira chaiyo yekufamba, muzita raJesu.
Ishe, kubudikidza neropa rakadeurwa pamuchinjikwa weCalvari, ndinobvisa kumanikidza kwese kwakagadzirirwa kuzorwa neni nhasi. Ini ndinotyora zvidimbu zvese musungo wemuvengi ungazonditorere hupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Ishe, nekuti zvakanyorwa, asi Ishe vakatendeka, uye vachakusimbisai nekukudzivirirai kubva kune wakaipa. Ndinonamatira simba renyu nhasi. Ndinoshandisa simba renyu pamusoro pehupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Ishe, pandiri kubuda mangwanani ano, ndinonamata kuti ngirozi yaIshe iende pamberi pangu ibvise huipi hwese hwakaipa hwadhiyabhorosi mumugwagwa. Ndinoporofita handisi kuzowirwa netsaona nhasi muzita raJesu.
Ndinozivisa kuti vanoba vanhu havafaniri kuuya nhasi muzita raJesu. Ndinoraira kuti netsitsi dzaIshe, handingavi nyajambwa wembara muzita raJesu.
Ndinonunura nhasi neropa rakakosha raJesu. Ndinotungamira dhimoni rega rega rekuyamwa ropa iro rakapika kutora hupenyu nhasi pamuchinjiko weCalvari, uko kune kuwanda kweropa kuyerera muzita raJesu.
Baba, rugwaro runoti Shingai uye shingai. Musatya kana kuvhunduka pamberi pavo, nekuti Jehovha Mwari wako ndiye unoenda newe; Haazombokusiyi kana kukurasa. Ndinonamata kuti musandisiya nhasi muzita raJesu. Ndinonamata kuti muvengi arege kundikunda nhasi muzita raJesu.
Hakuna chombo chakagadzirirwa kukwikwidza chichakunda, uye iwe unoramba rurimi rwese runokupomera. Iyi inhaka yevaranda vaIshe, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ishe, ndinoraira kuti hurongwa hwese hwevavengi kuti vandikuvadze nhasi hunokoneswa. Ndinodzima marongero avo pamusoro pehupenyu hwangu nhasi nesimba muzita raJesu.
Baba Tenzi, makavimbisa mushoko renyu kuti kunyangwe ndikapfuura nemumoto, haundipise. Iwe unovimbisa kuva neni kana ini ndichipfuura nepakati pemvura yehupenyu. Ndinoshandisa rugwaro urwu pamusoro pehupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Kunyangwe ndichifamba mumupata wemumvuri werufu, handityi zvakaipa, nekuti muneni. Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Baba, handityi chakaipa nhasi pandinotsika zvebasa. Ndakagadza vatumwa vaishe kutonga hupenyu hwangu; vachanditungamira munzira chaiyo yekufamba nhasi muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti dziviriro yenyu ive pandiri mangwanani ano. Sezvo ini ndiri kubuda mumba nerunyararo, ini handizodzoka ndakafa. Ndinotsvenesa nhasi neropa rakakosha raJesu, uye ndinopa chirevo kuti harina chakaipa muzita raJesu. Ameni.
Previous nyaya10 Anesimba Mavhesi eBhaibheri eSimba neMinamato
inoteveraKunamata Points Yekukomborerwa Kwamazuva Ose
Mapisarema 91 munyengetero Pfungwa dzeDziviriro
30 Minamato yeMinamato YeMarudzi
5 Nguva dzaunogona kushandisa Mapisarema 20